Deni iyo Axmed Madoobe oo eedeeyey dowladda dhexe
Saciid Deni iyo Axmed Madoobe
Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullahai Deni iyo Axmed Maxamed Islaam ayaa kadib kulamo ay muddo laba maalmood ah ku yeesheen magaalada Boosaaso soo saaray war-murtiyeed ka kooban 16 qodob.
Labada madaxweyne ee maamul goboleedyadaasi ayaa ku sheegay war-saxaafadeedka inay isla qaateen inay iska kaashadaan dhincayada dhaqaalaha, arrimaha bulshada, la-dagaalanka argagixisada, isdhaafsiga xogaha dhinaca amniga iyo dambiilayaasha.
Waxay labada mas’uul ku sheegeen war-saxaafadeedkooda inay jiraan caqabado dhaawacaya hirgelinta nidaamka federalaynta, waxayna sheegeen in caqabadahaasi ay ka imanayaan dhinaca dawladda federaalka.
Waxay sidoo kale ku sheegeen war-saxaafadeedkooda in nidaamka dib u eegista dastuurku ee ay waddo dawladda federaalka uusan ku dhisnayn hannaankii qabyo-tirka dastuurka, waxayna ku baaqeen inay ka wada tashtaan dawladda federaalka iyo mamaul goboleedyada.
Labada dawlad goboleed ayaa ku eedeeyey dawladda federaalka inaysan diyaarin jawigii ay doorasho qof iyo cod ah uga dhici kari lahayd dalka, waxayna sheegeen inaan laga heshiin sharciga doorashada.
Waxay kaloo sheegeen in sharciga shidaalka iyo kan saxaafadda ee ay ansixiyeen baarlamaanka iyo xukuumaddu uu khilaafsan yahay mabaadi’da federaalka.
Labada maamul goboleed waxay sheegeen inay cambaaraynayaan cunaqabataynta duulimaadyada ee la saaray Jubbaland oo ay ka dhalatay xaalad bani’aadminnimo oo khatar ku ah dadweynaha Jubbaland, sida ay ku sheegeen war-saxaafadeedkooda.
Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaan weli ka jawaabin war-saxaafadeedka kasoo baxay labada maamul goboleed. Dawladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashadii dhacday bishii August ee sannadkii hore ee madaxweynaha Jubbaland loogu doortay Axmed Maxamed Madoobe.